Kuveyt Menkul | Bog Hore
Maal gasho suuqyada adduunka!
Fur koonto hadda si aad ugu maal gashato sumadaha adduunka ugu horreeya!
Fur akoon dhab ah Fur akoon dhab ah
Magaca awoowe Telefoon E-mail
Furitaanka akoonku wuxuu dammaanad ka qaadayaa inaad tahay 18 sano jir iyo inaad aqrisay oo aad aqbashay siyaasada asturnaanta.
AED / USD 3.67325 (0.2%)
AFN / USD 76.984 (-0.1%)
AMD / USD 509.253 (0.2%)
ANG / USD 1.79508 (-0.9%)
ARS / USD 81.9000819 (0.5%)
AUD / USD 1.3437248 (-0.8%)
AZN / USD 1.6992 (-0.9%)
BDT / USD 84.7352 (-0.4%)
BGN / USD 1.6079 (-0.2%)
BHD / USD 0.37715 (-0.4%)
BIF / USD 1938.163 (-0.4%)
BND / USD 1.33158 (-0.1%)
BOB / USD 6.8719076 (-0.6%)
BRL / USD 5.1783957 (1%)
BSD / USD 1 (0%)
BWP / USD 10.9837 (1%)
BYN / USD 2.56615 (0.7%)
BZD / USD 2.0157 (0%)
Xisaabiyaha Dakhliga Forex
Waad sii xisaabin kartaa qadarka aad kasban doonto adiga oo dooranaya xadka, leverage iyo dhaqdhaqaaqa lacagta.
Waad la socon kartaa sicirka sarrifka isla markiiba adoo adeegsanaya aaladda beddelka lacagta.
Kuveyt Menkul waa hay'ad dhexdhexaad ah oo caalami ah oo u adeegta inka badan 20000 maalgashadayaal ku nool 14 dal.
Adoo ka faa'iideysanaya fursadaha sarreynta sare, waxaad ku sameyn kartaa xawaalad adoo labalaabaya lacagtaada.
Tababarro Bilaash ah
Waad ku mahadsantahay tababarada ay diyaariyeen tababarayaasheena xirfadleyda ah, ka bilow amar buuxa ee suuqa forex.
Waad ka faa'iideysan kartaa faa'iidooyinka ku habboon qaddarkaaga maalgashiga iyada oo ay ugu wacan tahay noocyada akoonnada ee sida gaarka ah loogu diyaariyey maalgashadayaasha qaab kasta.
Laba Waddo Maalgashi
Kuveyt Menkul waa shirkad bixisa oo kaliya dhaqdhaqaaqa kor u kaca laakiin sidoo kale bixiya dhaqdhaqaaqa hoose.
Nagu Saabsan Fur akoon dhab ah
Si dhakhso leh u maal gasho Kuveyt Menkul si aad natiijada u hesho isla markiiba
Maalgasho suuqa dhabta ah , si live ah u arag fursadaha maalgelin
Wareejiso akoonkaaga Forex ,kana faa'ideyso fursadaha jira.
FAA'İİDOOYİNKA AAN HEYSANO
Si loo bixiyo khibradaha maalgashiga ugu wanaagsan, Kuveyt Menkul wuxuu taageeraa maalgashadayaasha xirfadleyda ah iyo maalgashadayaasha bilowga ah iyadoo la siinayo alaabo waxbarasho, tikniyoolajiyada ganacsi ee ugu dambeysay iyo goob ganacsi oo xawaare leh.
Waxay ka soo baxday hadafka ah in la siiyo macaamiisheeda shuruudaha ganacsi ee ugu wanaagsan ee suurtagalka ah iyo siyaasadaha marin-u-helka bilaashka ah iyadoo la adeegsanayo la-taliyayaal khubarro ah.
Ilaa 1/200 saamiga leverage
Nuucyada Xisaabaadka Faa'iido Leh
Taageerada falanqaynta aasaasiga ah
5/24 Taageero toos ah
Fursadaha Kala-wareejinta EFT iyo Wire ee ku jirta TL-USD-EUR illaa Xisaabaadka Bangiyada Turkiga.
In la hubiyo dirida lacagta isla maalinta la diro codsiyada lacag labixida ilaa 16:00 iyo lacag dhigasho 24/7 ah
MetaTrader 5 deji
MetaTrader 5, waa madal ganacsi caan ah oo Forex iyo falanqayn kaasoo bixiya lacagaha ganacsiga, kaydka, macdanta qaaliga ah iyo CFDs ee suuqyada saamiyada. Qaybtan, macaamiisha Kuveyt Menkul waxay soo dejisan karaan MetaTrader 5 madal ganacsi iyo barnaamijyadooda mobilada ah ee loogu talagalay PDA, iPhone®, iPad ™ iyo Android.
Ma dooneysaa inaad kasbato faa'ido dheeri ah?